Waxaa hoos u dhigay astaamaha xad dhaafka ah ee Wave Google | Martech Zone
Waxaa hoos u dhigay astaamaha xad dhaafka ah ee Google Wave
Khamiis, Janaayo 7, 2010 Khamiis, Juun 18, 2015 Adam Yar
Waxaan la isticmaalayo Google Wave hadda dhowr bilood. Markii ugu horreysay ee aan maqlay Wax ku saabsan, waxaan u maleynayay inay u egtahay inay xiiso leedahay. Waxaan markaas daawaday muuqaal cajiib ah oo cajiib ah ku saabsan aaladda oo waxaa hareeyay awoodda iyo kartida waxa umuuqday kacaan sugaya isgaarsiinta khadka tooska ah.
Ka dib markii aan codsaday casuumaad ugu dambayntiina aan helay marinka adeegga waxaan si tartiib tartiib ah u bilaabay xulashada xiriirada asxaabta kale iyo asxaabta kale ee iyagana heli kara Google Wave. Qalabka isgaarsiinta, waxay ka dhigeysaa mid waxtar yar haddii aanad la hadli karin dadka aad sida joogtada ah ula macaamisho maalin kasta.
Google Wave ballanqaaday inuu siinayo fursado abaabulka munaasabadaha, wadaagista wada xiriirka iyo dukumintiyada si siman loo qaybiyo. Waad wadaagi kartaa sawirro, fikrado, fiidiyowyo, qoraalo, dukumiintiyo, iyo xitaa ciyaaro dhamaan isla madal kujira daaqada biraawsarka jira.
Xaqiiqdu waxay tahay wali ma aanan la kulmin kacaankii dhabta ahaa ee isgaarsiinta naftayda. Adeegsiga ugu ballaadhan ee aan ka arkay Google Wave waa wada shaqaynta aan la yeeshay saaxiibkay oo u qoraya mid ka mid ah baloogyadayda. Waxaan ku wadaagnaa yoolalka, fikradaha, su'aalaha iyo istaraatiijiyada Wave oo si fiican ayey u shaqeysaa.
Weli waxaan sugayaa inay runti kacdo in kastoo. Waxaan u maleynayaa habka ay ugu ridi karaan isticmaalka xad-dhaafka inuu noqon doono ku dhowaad inuu beddelo kan hadda jira Gmail shaqeynta leh Google Wave. Oh, iyo inta ay ku jiraan, kaliya ku dar Google Dukumiintiyada iyo Google Halkaas kula sheekayso. Waxaa laga yaabaa in xitaa rusheeyo ah Kooxaha Google inaad sidoo kale qaado.
Waxaan wali qabaa Google Wave wax ka beddeli doonaa isgaarsiinta khadka tooska ah. Kaliya uma maleynayo inay dhaceyso illaa iyo inta xitaa saldhig ballaaran oo isticmaale ahi awood u leeyahay inuu ku fuulo barxadda iyo wixii kale Google adeegyada waa la isku daraa ama waa laga takhalusaa.
Tags: google ruxruxgoogle +
Sida Loo Dhaqaajiyo Qoraalkaaga Blog isla markaana loo ilaaliyo xilliga raadinta
Jan 7, 2010 at 11: 47 AM
Jason, waxaad kaliya ku soo koobtay dhowr tuduc oo gaagaaban, sida saxda ah waxaan ka dareemay Google Wave. Runtii waxaan doonayay inay gabi ahaanba kacdoon ka sameyso habka aan u shaqeeyo, laakiin waxaa iga tagay anigoo aad u liita.
Jan 7, 2010 saacadu markay ahayd 8:09 PM
Jason, boosteejo weyn! U soo bandhigidda dhagaystayaasha halkan farsamo yaqaan run ah iyo adeegsiga balooglaha ee 'Wave' waa mid soo daahay. Mahadsanid!
Jan 7, 2010 saacadu markay ahayd 9:59 PM
Jason, inbadan waan heshiin kari waayey.